ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်နည်း သိပါတယ် … လက်တွေ့လုပ်ဖို့ ခက်နေပါသလား …. | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်နည်း သိပါတယ် … လက်တွေ့လုပ်ဖို့ ခက်နေပါသလား ….
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက် အမှာစကား ပြောသည့် 8-Jan-2014 တွင်၊ ဝန်ကြီးဌာန သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိ၍ ဖေါ်ဆောင်မှု ခက်ခဲနေဟု ဆိုသည်။ ယခု မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန ဟု သတ်မှတ်လိုက်သောကြောင့် ပိုမိုအောင်မြင်လာမည် ဟုဆိုသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှုန်းကို (I.H.L.C.A) နှင့် UNDP, UNICEF ၊ အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဝန်ကြီး ဌာနတို့မှ ၂၀၁၀အထိ စစ်တမ်းရှိကြောင်း။ လမ်း၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး၊ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ချေးငွေ ရရှိရေး တို့အကြောင်း ပြောသွားသည်။ အရေးကြီးသော အဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့် ကာ/ချုပ် (ကြည်း) ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ကုန်ကျငွေများလွန်းသော စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး အစား၊ ဝင်ငွေရနေသော မွေး-ရေ ဝန်ကြီးဌာနတွင် ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းကို ကြိုဆိုရမည်။ တစ်ရွာသိန်း ၃၀၀ ဖြင့် ရွာ ၁၀၀၀ ထုတ်ချေးမည် ပြန်ပေးစရာမလိုအလွဲသုံးလျင်အရေးယူမည် ဟု စီမံကိန်းဝန်ကြီး ဒေါက်တာကံဇော်က ပြောသည်။ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးဌာနမှ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၌ကျေးရွာ ပေါင်း ၆ သောင်းကျော်မှ နမူနာ ရွာတစ်ထောင်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုစတင်နေသည်။
အထက်ပါ မြေပုံ CIA 2008 အရ မြန်မာ (အညိုရောင်) သည် အန္နိယ (အဝါရောင်) ထက် ဆင်းရဲမွဲတေသူ ပိုများနေသည်။ မြန်မာလူမျိုး ၄၀% တစ်နေ့၊ လူတစ်ယောက်၊ ထမင်း၂နပ်စားစရိတ် 0.60 ဒေါ်လာ ပင်မတတ်နိုင်ပဲ ဆင်းရဲမွဲတေနေကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်၃၀ ၁၉၈၀ ကျွန်ုပ်တက္ကသိုလ်အဆောင် နေစဉ် ကတည်းက တစ်လ ၄ဒေါ်လာ (ကျပ် ၁၂၀)၊ တစ်နေ့ 0.10 ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် အစိုးရထောက်ပံ့သော ဆန်ကိုစားသောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ဆင်းရဲမွဲတေမှန်းမသိခဲ့။ အခုမှ ဒါလောက်ဆင်းရဲမွဲတေ ရလေခြင်း ဟု သိရပြီး ငိုချင်မိသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးသည် လယ်ယာ၊မွေး၊ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆိုင်နေသဖြင့် ထိုကဏ္ဍကြီးများတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များက ချေးငွေရမည်ဖြစ်မည်။ မြန်မာပြည်သည် ၁၉၈၅ နောက်ပိုင်း ချေးငွေများစွာ မဆပ်နိုင်ခဲ့၊ ယခု ဂျပန်နှင့်နိုင်ငံတကာ အကူညီကြောင့် ADB, World Bank(IDA), IMF စသည့်တို့မှ ချေးငွေ ရရှိလာသည်။
ကျေးလက်ဒေသများတွင် ဝမ်းစာဆန်နှင့်၊ ဟင်းကို လယ်တောမှရှာစားရသည့် အဆင့်က တက်လာပြီလား ဟု မေးပါက၊ တက်မလာသေးပါဟု ဖြေကြသည်။ လယ်ပိုင်ရှင်များကတော့ ဟန်းဖုန်း၊ တီဗီ၊ မီးစက်၊ ကျေးလက်လူထုမှာ သူရင်းငှားဘဝရောက်သွား..ဟုဆိုသည်။ ကျေးလက်လူထု ဝင်ငွေရအောင် နည်းလမ်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူ လုပ်ငန်းများ ပံ့ပိုးပေးရန်သာရှိသည်။- မြန်မာပြည်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေတင် အသုံးချနိုင်ပါက တောင်သူလယ်သမားများ ဝင်ငွေတိုးလာမည် သေချာပေါက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြစ်ရေတင်ခြင်းနှင့် ဆည်မြောင်းစီမံကိန်းများအတွက် အစိုးရမှာငွေမရှိ၊ တလောက ရေတင်လျှပ်စစ်ဖိုး အလကားပေးရမည့်အစား၊ ဈေးမြှင့် တောင်းသောကြောင့် လူထုဆန္ဒပြလုနီးပါး ကြုံခဲ့ရသည်။ လျှပ်စစ်ကို မြန်မာတပြည်လုံးရှိ ကျေးရွာအားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဟု ဆိုသော်လဲ ဝိသမကုမ္ပဏီများက မြို့နယ်သို့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် လှည့်သွားသည်။ တစ်ယူနစ် ကျပ် ၂၅၀နှုန်းဖြင့် မတရားရောင်းစားခွင့် ပါမစ် (လက်ဝါးကြီးအုပ်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း) ကို အကောင်အထည် ဖေါ်နေသဖြင့် စိုးရိမ်ရပါသည်။
♦ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ
MDG ဆိုသည်မှာ the Millennium Development Goals ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တစ်ဝက်ခန့်ဆင်းရဲမွဲတေသူများ သို့ ချဉ်းကပ်နေကြောင်း Harry Truman ကပြောသည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အံ့သြဖွယ်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကျဆင်းသွားလေသည်။ ကြေးမုံသတင်းစာ 14-08-2013 ပါမောက္ခဦးအောင်မြင့် ဆောင်းပါးအရ၊ ၁၉၉၉ – ၂၀၁၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေသူများ တစ်ဝက်ခန့်ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းသည် လစာမကောင်းပါ။ သို့သော် စာရိတ္တကောင်းသူများစွာ ဖြစ်သည်။ အလားတူ ပညာရေး၊ တက္ကသိုလ်ကထိက၊ ပါမောက္ခများလဲ လစာနဲပြီး၊ စာရိတ္တကောင်းသူများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် မလိုအပ်ပဲ မသုံးမစွဲ၊ ချိုးခြံချွေတာတတ်သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများက ဦးဆောင်သော ဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းများသည် အောင်မြင်ပါသည်။ သို့သော် အကောင်ထည်ဖေါ်ရသော နိုင်ငံတွင် အကျင့်ပျက်သူ၊ နားမလည်သူ များစွာ ရှိပါက အကူညီများသည် သဲထဲရေသွန် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင်က အာဏာရှင်ဖြစ်ပါက ပိုဆိုးသည်။ ၁၉၈၂ခု အာရှဘဏ်ချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း၈၀ဖြင့် မကွေးတိုင်း၊ မင်းဘူး၊ ကမ်းနီမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ၊ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ လူညာ၊လူဝါ များကြောင့်း ဝါဂွမ်းဧက ၂၀၀၀ အတွက်သာ ရေပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံအကြီးအကဲ ဦးနေဝင်းက ဘုမသိ၊ ဘမသိပဲ လာကြည့်ရှု၊ မေးမြန်းရာ စပါးမစိုက်နိုင်သောနေရာတွင် တံမံ၊ လျှပ်စစ်ရေတင်ပံ့ကြီးများစွာ၊ အလဟသဖြစ်သည်ကို စီမံကိန်းပြီးသွားမှ သိရှိသွားရသည်။ ထိုစီမံကိန်းကို ဦးစီးရသူ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ ဦးလှချိုဦး (ယခု နယူး ယောက်မြို့နေထိုင်သူ) ၏ အမှတ်တရဆောင်းပါးတွင် ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် “ဟာ.. ဝါဂွမ်း တစ်ဧက ဒေါ်လာ ၄ သောင်းတောင် ရင်းနှီး မှတော့ ရွှေပင်ပဲ စိုက်တာကောင်းတယ်.” ဟု ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးအား မအေ၊ နှမ တိုင်းထွာပြောဆိုပြီး လှည့်ပြန်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီးကလဲ သူကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်၊ ဝန်ကြီးကလည်း ခေါင်းဆောင်လုပ်ခိုင်းသလို လုပ်။ တခါက ထိုကဲ့သို့အဖြစ်များ မရေမတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယခုလဲ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိတို့ အိပ်ထဲရောက်မည့် ငွေကိုပဲ သိပြီး နောက်၁၀နှစ် အတွက် ဂရုမစိုက်သည့် အရာရှိကြီးများကို အပြစ်ပေး၊ အနားယူစေရမည်ဖြစ်သည်။ စာရိတ္တကောင်းပြီး၊ တတ်ကြွမ်းသူများ လုပ်ဆောင်ပါက ဆင်ရဲမွဲတေမှုသည် အလျှင်အမြန် ပပျောက်သွားပါမည်။
မြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် လစာနှင့်မလောက်နိုင်ပါ။ စားဝတ်နေစရိတ်ကို ခေတ်ကာလနှင့်အညီ အစိုးရက ပံ့ပိုးထားရပေမည်။ အစိုးရပေးသော လစာငွေ၊ နေအိမ်ထက် ပိုကောင်းတာ လိုချင်ပါက ပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများသို့ အလုပ်ပြောင်းရန်သာရှိသည်။ ဝန်ထမ်းလဲလုပ်၊ စီးပွားရေးလုပ်လာပါက အဂတိလိုက်စားမှုကို မရှောင်နိုင်ပါ။
စာရေးသူ ပါမောက္ခဦးအောင်မြင့် ရေးသည့်အတိုင်း၊ ကမ္ဘာကြီးသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရန် မည်သို့လုပ်ရမည့်နည်းလမ်းကို လူများသိပြီးဖြစ်သည်။ လက်ဝါးအုပ် စီးပွားရေးစနစ်များကို မထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အိန္နိယနှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများ ပိုဆိုးကြသည်။ ကျွန်ုပ်က ဆရာပါမောက္ခ ဆင်ဆာချန်ခဲ့သည်ကို ထည့်ရေးပါမည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင် တို့သည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကြီးမားသော နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နှင့်အာဖရိကနိုင်ငံ နိုင်ငံများလောက် မဆိုးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြေအနေ မကောင်းပါ။ ယခု မြန်မာအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် စာရိတ္တပညာကို အစိုးရနှင့်ဌာနဝန်ထမ်း အကြီးတန်းအရာရှိကြီးများကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက စံနမူနာပြ၊ ကြိုးစားလေ့ကျင်၊လက်တွေ့လုပ်နေသည်။ နောက်ကြောင်းပြန်လိုသည့် အုပ်စုအတွက်တော့ ဒဏ်ပေးရန်သာ ကျန်တော့သည်။ အမေရိကန် စီးပွားကပ်ဖြစ်တိုင်း စာရိတ္တကောင်းသော သူဌေးကြီးများက ဘုံလယ်ယာ၊ များစွာဖန်တီးပြီး လူများကို ကျွေးမွေး၊ အလုပ်ပေးထားလေ့ ရှိသည်။ ဗီယက်နမ်အစိုးရသည် အသက်ကြီးသူများအား ထီလက်မှတ်၊ ထောက်ပံပေးပြီး ရောင်းချစေပြီး ဝင်ငွေရစေသည်။ အလုပ်များဖန်တီးပေးပြီး၊ ခိုးဝှက်၊ခေါင်းပုံဖြတ်သူ နည်းပါးစေသည်။ သူများပြောသည့်အတိုင်းမလုပ်ပဲ မိမိနိုင်ငံသား လူငယ်များကို တိုးတက်နိုင်ငံကြီးများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်၊ ခရီးသွား၊ အောက်ခြေထိ၊ လေ့လာခြင်းကို အရှိန်မြှင့်တင်ပေးရပါမည်။ နိုင်ငံခြားထွက်၊ ဟိုတယ်ဇိမ်ခံ၊ ချွေတာ၊ အစိုးရခရီးစရိတ်ထုတ်စားသော ခေတ်လဲကုန်လောက်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ရန်၊ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်ကိုပင် အစိုးရက လုပ်မပေးနိုင်သောကြောင့် ပိုမိုဆင်းရဲ မွဲတေသလို ဖြစ်သွားသည်။ အချက်အလက်များကို ၂၀၁၄ မတ်လ သန်းကောင်စာရင်းကောက်ချိန် သိနိုင်ပါမည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခေါင်းဆောင်များ ဆင်းရဲမွဲတေပပျောက်နည်း သိရုံမက၊ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့သည်။ အမေရိ ကန်၊ ဂျပန် ခေါင်းဆောင်များလဲ သိရှိ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ အကျင့်ပျက်မှုများကို မထိန်းနိုင်သဖြင့် ကြွေးကြော်ခဲ့သလို တောင့်မထားနိုင်တော့ပါ။ ဝေဖန်ခံရတော့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ၁၉၈၉ အရေးအခင်းကြီး Tiananmen Square protests of 15 April 1989 –4June 1989 တွင် မြို့ကြီး ၄၀၀ မှာ ၃လကြာ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ တိန့်ရှောင်ဖိန့်အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အရှိန်ဟုန်မြှင့်ချိန် အစိုးရထိပ်ပိုင်းလူများ လာဘ်စားမှုနဲ့ ဆွေမျိုးများစီးပွားလုပ်မှု corruption and nepotism အရမ်းကြီးမားလာ၍ ဖြစ်သည်။ အစိုးရခေါင်းဆောင်များတွင် စစ်အင်အားသုံးမလား၊ မသုံးဖူးလား ချင့်ချိန်နေရင်း နောက်ဆုံး တိန်ရှောင်ဖိန့်က စစ်အင်အားသုံးပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ခရီးဆက်ရသည်။ အရေးယူရသည်။ ယခု တရုတ်နိုင်ငံအခြေအနေ တိုးတက်ရောက်ရှိလာပေသည်။ တရုတ်ပြည် ခေါင်းဆောင်သစ်များ၏ စာရိတ္တ ပညာ ကောင်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်လာရသည်ဟု ကောက်ချက်ချလိုပါသည်။
အဆင်းရဲမွဲတေဆုံး တောင်သူလယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရင်လေးဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေမှအစ ထိုရောက်စွာကူညီဖို့လိုသည်။ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် တရုတ်ပြည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့က စက်မှုလယ်ယာ၊ မျိုးစေ့၊ နည်းပညာ လုပ်ငန်းရှင်များကို ၄၀% အထိ ဥပဒေဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်သွားဖြင်းဖြစ်သည်ကို မြန်မာအစိုးရ သိပါသည်။ စက်မှုလယ်ယာ ပစ္စည်း တရုတ်ပြည်မှ တင်သွင်းသည်ကို အခွန်ကြီးမားစွာ ကောက်နေခြင်းမှာ အလွန်အန္နရယ်ကြီးသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ လယ်သမားကိုယ်တိုင် ထိုင်း၊ တရုတ်ပြည်မှ လယ်ယာသုံးပစ္စည်း သွားရောက်ဝယ်ယူ တင်သွင်းခွင့် ပြုပြီး၊ အခွန်မဲ့ဖြစ်ရမည်။ မြန်မာပြည်တွင် လယ်ယာသုံးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများကိုလည်း တရုတ်ပြည်လို ၄၀% Subsidy ပံ့ပိုးပေးရမည်။ တရုတ်လုပ်သော ကျပ်၃သိန်းတန် ကောက်ရိတ်စက်၊ လယ်ထွန်စက် ပြည်တွင်းထုတ် ရောင်းချသူအား စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ၄၀% အစိုးရက ပံ့ပိုးပေးလျှင် လယ်သမားများ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ နှစ်တိုအတွင်း လွတ်ကင်းမည်ဖြစ်သည်။
အစိုရလူကြီးမင်းများ၏ စာရိတ္တပညာဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ လွှတ်တော်အမတ်အချို့မိသားစု ဝင်ငွေမှာ မလုံလောက်၊ ဝင်ငွေပိုကောင်းသည် (ပါမစ်၊ လိုင်စင်၊ အိမ်မြေ) လုပ်ငန်းများ လုပ်နေရသည်ကို ဝမ်းနည်းစွာ တွေ့မြင်နေရသည်။
♦ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လူထုအုံကြွမှု မဖြစ်စေပဲ corruption and nepotism ကို မီဒီယာအကူညီဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ပါတီကြီးတို့တွင် အာဏာရရှိရေးအတွက် ဦးတည်ခြင်း၊ စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်လည်း ငွေ၊ အာဏာကိုပဲ ဦးစားပေးနေခြင်းမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုနေသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအပေါ်တွင် လုံးဝတည်နေပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ပေါ်လစီနှင့် စီမံကိန်းများတွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မှဖြစ်မည်။ လုပ်နည်း၊ ကိုင်နည်း၊ သိပြီးဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းများ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အိုင်အမ်အက်ဖ်၊ အာရှဘဏ် စသည့် အဖွဲအစည်းများမှာ အထူး၊ အကူညီပေးနေချိန်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ ပေါ်လစီအတိုင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများကို မဏ္ဍိုင်တည်က အခွန်ကောက်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သွင်း/ထုတ်ကုန် များတွင် တိုးတက်လာသည်ကို ဝမ်းမြောက်ရသည်။ သို့သော် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးအတွက်
ထပ်ရေးရလျှင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရန် စာရိတ္တပညာအခြေခံသော စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူ တော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခု လုပ်ရပေမည်။ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံအား လေ့လာ၊ နမူနာယူပြီး၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ ဖိလစ်ပိုင်တို့မှ အတုယူစရာမရှိပါ။ လူလတ်တန်းစား လယ်သမား၏ ဝင်ငွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ TARGET Calbo Fertilizer ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှ တွက်ချက်အရ ကလေး၂ယောက်ရှိသော လယ်မြေ ၅ဧကပိုင် ပဲခူးတိုင်း တောင်သူမိသားစုအတွက် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ သိန်း၆၀ခန့် (နှစ်သီးစိုက်) ဖြစ်သည်။ အစိုးရမှ အဖွဲ့လုပ်ပေးပြီး အလုပ်မဖြစ်ပါက ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်များမှ ကိုယ်ကျိုးမဖက် သော ရပ်မိဘများက ၊ ငွေမရှိ၊ စေတနာရှိ၊ ပညာရှိ၊ စာရိတ္တရှိစွာဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ အားရဖွယ်ဖြစ်သည်။ လူငယ်အင်အားကို အသုံးမချနိုင်လျှင် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများနှင့် ခရိုနီများက ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီယားကဲ့သို့ ကြီးစိုးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ထို လူငယ်အဖွဲ့များ စာရိတ္တ နှင့် စေတနာမေတ္တာဖြင့် ထိုးဖောက်၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နောင်ဆယ်နှစ်ခန့်အကြာ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းပပျောက်ပြီး၊ Corruption & Nepotism အပေါ် အောင်ပွဲခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး MDG လုပ်ငန်းကို အင်တာနက်တွင် လေ့လာပါက 1. extreme poverty and hunger 2.primary education 3.equality women 4.child 5.maternal health 6.HIV/AIDS and diseases 7. environmental sustainability 8. partnership စသည်တို့တွင် ကမ္ဘာ့အဖွဲ့စည်း ၂၃ခု လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှု သတ်မှတ်ချက်မှာ လူတစ်ဦး တနေ့စားသောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်သလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာစံနှုန်း 1.25 US$ dollar per day, Ref. www.unicef.org (2011 data).
၁။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄.၉၀
၂။ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၁.၇၉
၃။ သြစတြေးလျား ဒေါ်လာ ၈.၀၂
၄။ မလေးရှား ဒေါ်လာ ၁.၃၆
၅။ ထိုင်း ဒေါ်လာ ၁.၇၁
၆။ ဗီယက်နမ် ဒေါ်လာ ၀.၅၈ (၁၉၉၃ တွင် ဒေါ်လာ ၀.၂၈ မှ တိုးတက်လာသည်)။
၇။ အိန္နိယ ဒေါ်လာ ၀.၆၀
၈. နိပေါ ဒေါ်လာ ၀.၄၅
၉။ မြန်မာ ဒေါ်လာ ??? (အိန္နိယထက်နိုမ့်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်)
၁၀။ ကမ္ဘောဒီယား ဒေါ်လာ ၀.၂၃
ယခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းအဆောင်တွင်၊ တစ်ဦး တစ်လကျပ်၅သောင်းဖြင့် ကျွေးမည်ဆိုသဖြင့် ၊ တစ်ရက် ကျပ်၁၇၀ (0.17 dollar) ဖြစ်သည်။ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အရှေ့တီမော လူဦးရေတစ်ဝက် ဆင်းရဲမွဲတေနေကြသည်။ ယခု ဤဆောင်းပါးဖတ်သူသည် အင်တာနက်၊ သတင်းစာ ဖတ်နိုင်သဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေသူမဟုတ်ပါ။